Ixesha lokucima le website? QAPHELA 15-05-2019: UMartin Vrijland
Ixesha lokucima le website? QAPHELA 15-05-2019
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	13 Meyi 2019	• 17 Comments
Kwakuyiminyaka embalwa ebunzima kwaye impembelelo ebomini bam ngasese yayinkulu. Okwangoku kufuneka ndiwenze isigqibo sokuyeka okanye ukuqhubeka. Ndithe ndathetha amaxesha amaninzi ukuba ukwenza uphando kunye nokubhala kweengcamango zengcamango kungeyona into yokuzilibazisa, kodwa nje umsebenzi wesikhathi esigcwele. Ndikwazo cacisa indlela Umkhankaso wokuhlambalaza kum umntu wam ukonakalise igama lam kangangokuba andinakukwazi ukusebenza ngokuqhelekileyo kuluntu. Nangona inani elincinci lamalungu kunye nabaxhasi liye lakwazi ukundibekela iindleko kwaye ndenze 'inxaxheba' apha naphandle, akusekho ngokuzinzileyo.
Ndiza kugqiba ekubeni ukunyanzeliswa kwamacandelo eendaba loluntu kunempembelelo enkulu. Kuyinto nje into yokuba abantu abaninzi abasaboni am amanqaku am okwixesha labo. I-Facebook ihlalutya "indawo enomdla" kwaye igqiba isigqibo sokuba okanye ingayibonakali. Kule manani ndiyabona ukuba oko kunempembelelo enkulu. Eyona nto ithetha ukuba usenako ukuvunyelwa ukuba uthethe oko ucinga okanye ucinge, kodwa ukuba isandi sifakiwe. Ukongeza, ubona iinzame ezingakumbi zokubhala izinto njengokuthi 'inzondo yentetho' kwaye ubona amabutho aseTroll asebenzayo kuzo zonke iintlobo zeeforamu eziqaphela ngokutsha konke endikubhalileyo kwingxoxo egcwele ukuphazamiseka kunye neziseko ezingamanga (umzekelo ngokusebenzisa isicatshulwa kwinqaku, okwenza ithathwa ngaphandle komxholo). Sekunjalo ndisekho phakathi kwe-20 kunye ne-30 ngeendwendwe ngosuku.
Kumele ndiqaphele ukuba abaninzi abantu abakhathaleli nantoni malunga nendlela abeendaba benza ngayo umgangatho Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo ukunyusa ngomthetho omtsha (jonga mzekelo). Ngoko ke ndingathini ukuya kwinkathazo yokuphakamisa yonke le micimbi kwaye ndiyibeke ingqalelo? Ngokuqinisekileyo akukho mntu unomdla nakwinto na kwaye ukuba kukho nayiphi na ulwazi malunga nento eyenzekayo, abantu baxoxe, bahlambe izandla baze baqhubeke nokukhathazeka kwansuku zonke.
Akukho mntu, kodwa ngokwenene akukho mntu, uqala ukusebenza. Ngokuqinisekileyo kukho abanye abantu abacinga ukuba luncedo ukumbhikisha okanye ukuthatha inxaxheba kwiinkcaso eziphikisayo zokuchasana zokugqoka i-vest yellow, kodwa asiyi kutshintsha ihlabathi. Abanye banokuhlawula iincinci ezimbalwa apha okanye apho kwiintetho ezityhilile ngokomoya okanye bathathe inxaxheba kwiseshoni yokucamngca, kodwa bambalwa kuphela kude kubekho umntu oqala ukuqwalasela ukuguqulwa kwintetho ekubhekiseni ubomi. Kanye kuphela ngexesha elithile ndifumana impendulo evela kubantu abayeka umsebenzi wabo obenegalelo lokugcina inkqubo. Uva nje kuphela okanye kabini ukuba abantu, umzekelo, bayeke ukuhamba kwiipolon.
Ukuba ufumana umfundi ukuba luncedo kwaye kuyimfuneko ukuqhubeka; ukuba ucinga ukuba kubalulekile ukuba umfundi aqhubeke ebhala izicatshulwa zengcamango; amaxwebhu apho ndiqhubeka ndihlolisisa amaphephandaba kunye nezopolitiko, ngoko lixesha lokuba uvakalise okokuxabisa. Andikwazi ukuhlala kwindawo yobumpofu kwaye ndingakwazi ukuhlangabezana nazo zonke iindleko. Ixesha lokuba ubonise ukuba kubulungu, njengoko unokuba lula nje ukuba ilungu likaDe Telegraaf, iNetflix, isiteshini sezemidlalo okanye enye imidiya. Ndiza kukubuza: Yintoni oyifumene ngakumbi? Ngelishwa, ukuba inani lamalungu lihlala kwinqanaba langoku, andisakwazi ukuqhubeka. Injongo ubuncinane amalungu angundoqo e-500 okanye elilingana naloo malungu. Kuzo zonke izigidi zamawaka ngosuku, kufuneka uphumelele.
Ngaloo ke unxeba olukhawulezayo kuwe. Ngeveki ndiza kugqiba isigqibo sokuba ngaba ndiza kuthatha i-website yonke ebandakanya indawo yokugcina i-intanethi ngaphandle okanye uqhubeke. Ithemba libekwe kuwe. Ndiyabulela kwangaphambili ukuxabisa!
Ndiye ndifumana isibonelelo esihle namhlanje. Zonke ezo zifuna ukuzaliseka, kodwa oko akuguquli into yokuba ndinomdla. Ngethuba lokuba ngamalungu ambalwa athe wongezwa (kubonga loo nto), ngokwenene imangalisekile ngokuqwalasela ubuninzi (amashumi amawaka abafundi ngabafundi), kodwa yonke into endifuna ukuqhubeka nayo. Ndiyabulela inxalenye yale nkxaso. Ngokukhawuleza xa uncedo oluthenjisiweyo luza kuzaliseka, ndiza kuthetha ngakumbi malunga nalo. Ngeli xesha ndiza kuqhubeka ngethemba lokuba yonke into iya kuhamba kakuhle kwaye ndikwazi ukuqhubeka ndibhalela ixesha elide. Okwangoku, qhubeka ujoyina, kuba inkxaso yakho iyadingeka. Ngaba bekungeke kube kuhle ukuba umthombo ozimeleyo unokufumana nje amalungu kunokuba uphumelele kuphela kwiinkcukacha ezinkulu zeendaba, ungacingi?
Ubungqina obuninzi beendaba ezilawulwayo ngokubungqina obunokuhlasela uMartin Vrijland (uNoomi Hoogeweij)
URobert Jensen kunye noJensen.nl isicwangciso sobutyebi sezokuphepha se-Infowars eNetherlands?
Indlela eyinkcenkceshe ngayo umdlalo ochasayo?
Umgangatho wokukhusela kwinqanaba elilandelayo: uPatrick Savalle uhambo lweqhinga ngeCafé Weltschmerz (iipateni zokukopela)
tags: zi boniswe, Martin, Ungaxhunyiwe kwi-intanethi, iplagi, ilizwe elikhululekile, website
Jord Zentveldt wabhala wathi:
13 Meyi 2019 kwi-15: 06
Mhlawumbi ingcamango yokwenza amaqaku akho abonakale kubantu abangewona amalungu kuphela ukuhlawulwa kweentengo ze-10. Oku kukunika umvuzo omkhulu, kwaye abantu abangafuni ukuba ilungu banokuzigqiba bona yiziphi izinto abanama-10 cents.
Ikhoboka lomvuzo wabhala wathi:
13 Meyi 2019 kwi-22: 33
Ngokombono wam akukona nje ukuhlawula, kodwa nangomzamo abantu abafanele benze ukuhlawula.
13 Meyi 2019 kwi-23: 20
Uthetha ukuthini ngokuthe ngqo?
14 Meyi 2019 kwi-08: 04
Uninzi lwabantu luphila ngokupheleleyo kwinkqubo. Kwaye nabantu abakwiinkqubo zokuvusa basaphila ngeenkqubo. Ukuba awufuni ukuhlawula ibhilikhi okanye ukulibala ukuhlawula inkonzo kwinkqubo (kubandakanye nabangenarhafisi zerhafu), ngoko awukwazi ukuyisebenzisa isevisi okanye unokufumana umsizi wesikhephelo ukutyelela ... nayo yonke imiphumo yayo. Abantu basebenziselwa oku kwaye iipatheni zendlela yokuhlala abantu abahlelwe phantsi kwazo ziwayo.
Xa usebenzisa i-Intanethi, uMartin Vrijland ungomnye (ngezinye iixesha ezininzi) iiwebhsayithi ezityelelayo kwaye kungekho ntlawulo efunekayo. Inkonzo inikwe kwaye abantu bayaqhubeka beziphatha njengoko inkqubo ikulindele kuzo. Ukuba intlawulo kufuneka yenziwe, bayaya kwenye iwebhusayithi ukuze bangene. Kunzima kakhulu ukuthumela imali. Ndicinga ukuba abaninzi bala bantu (iipesenti ezimbalwa sele sele bebaninzi) baya kukhwela iibhegi zabo kwaye banike i-euro okanye ngaphezulu xa bedibana nawe.
AnOpen wabhala wathi:
13 Meyi 2019 kwi-15: 13
Ngelishwa, asinabani na owenza uhlalutyo olunzulu eNetherlands njengawe. Yiba nembono yokuba abaninzi abayikholelwa i-100% baze baqonde oko ubhalayo, ikakhulu ngenxa yempembelelo ye-hypnosis yamacandelo eNLP weendaba. Lelizwi elithembekileyo lisuka, umzekelo, iindaba ze-RTL zenza kakuhle.
Njalo xa wenza umnxeba kunye nezinye ezimbalwa zongezwa, kodwa akwanele. Kodwa bathanda ukuthatha iingcamango zakho kwaye zizisebenzise kwenye indawo okanye zenze ihlazo. Ibhola okanye i-De Telegraaf, akukho simbolo, i-Niburu, i-GTST njl., Ngokwenene yenza ukuba babe nemvakalelo, ebaluleke kakhulu kubaninzi, bayakholelwa ngokukhawuleza kuyo ngaphandle kokungabaza.
Bathanda kwaye bamkela ihlabathi elitsha lamapolisa elibonakalayo. Yingakho iiprogram ezinjengalezo zamagosa okunyanzeliswa, amapolisa kunye nabaxhasi baqhuba kakuhle. Bafuna ukulawula kunye nokukhuselwa kwamanga. Ngokwenene Ukhohlise umntu wakho kwaye uhlale unamehlo njengezigebengu. Ukuzonwabisa oko.
Ihlazo lokuba liza kulo. Abanye baya kuvuyiswa xa ukukhathazeka kuyakuyeka loo nto iguqulwe ngeloyiyoloyiyo eyoyikisayo, uyazi.
13 Meyi 2019 kwi-16: 49
Ngale nto ndiyandisa iminikelo yam, kodwa ayanele.
Ndihlala ndigubungele amehlo endikubekayo kwiwebhusayithi yakho.
Ndiye ndafunda kunye namanye amehlo abantu kunye noMartin usuke ephosa.
Hamba uMartin, uyaqhwaba, kodwa ndikuthanda.
Ngoko nceda umnxeba kubambisene, uyaphambuka kwaye uba ilungu, akunjalo.
Danny wabhala wathi:
13 Meyi 2019 kwi-17: 24
Abantu bafana neenkomo zezilwanyana, bafaka i-euro kwibhokisi yokuqokelela "isizathu esilungileyo" kwaye bafake imali kwi-555.
Ngaba kuya kubakho ukuxilongwa kwengqondo, mhlawumbi andinakuyichaza.
Andikwazi ukuthetha okuninzi ngako, kukubona okubuhlungu.
Wenze le meko icacile ngaphambili, ngokucacileyo ayinandaba nabantu.
Okukuphela kokhetho oshiyekileyo kukubeka udonga lokuhlawula emva kwezinto zakho, abantu bafuna ukuhlawula xa befumana into ethile ngokubuyisela, kodwa kungekhona ukuxabisa.
chul wabhala wathi:
13 Meyi 2019 kwi-22: 28
Ndizama ukuba ilungu kodwa ayisebenzi. Ukuba ndifuna ukubonelela ngolwazi lokuhlawula, ndifumana umyalezo wephutha. Ngaba unendlela eyahlukileyo yokuba ndingayilungu?
Ngaba abanye banayo le ngxaki?
13 Meyi 2019 kwi-23: 19
Yintoni umyalezo wephutha ukuba ndibuze?
14 Meyi 2019 kwi-15: 20
Ewe, ukudaliswa kwentlawulo kwahluleka phambi kokuba umthengi abuyelelwe kumniki-ntlawulo. Ulwazi lokuhlawula: umthengi uyafuneka kulolu hlobo oluphindaphindiweyo.
Ndazama ukubhalisa ngeDeal.
14 Meyi 2019 kwi-18: 06
Kufuneka ukhethe ukhetho olukhethileyo ngeDeal uze ukhethe ibhanki yakho
DHBoom wabhala wathi:
14 Meyi 2019 kwi-09: 06
Ubhalisiwe njengesiseko senyanga ephelileyo, ngoku kuphuculwe ukuthenga! Nceda uhlale! Abantu bafuna oku kwaye kukhanyisa xa uveza isihloko kwaye emva koko i-bill isetyenziswe iingxelo zeendaba (ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo) ... Kwaye bonke abo bantu bandizungezile bayayithemba ... ..
Lindy Heijmans wabhala wathi:
14 Meyi 2019 kwi-09: 59
Ndisanda kuphinda ndiyenze ubulungu bam ngokudityaniswa ngqo. Ndenzile loo nyaka odlulileyo kwakhona, ndithintela ngokukhawuleza kwintlawulo ye-debit kwaye ndafumanisa ixesha elithile elidlulileyo ukuba kwakungekho nto ehambayo emva koko .... Ngoku ndihlala ngamehlo kwizinto ezingcono. Ndiyakuthanda ukufunda amaqaku akho, akunakuyenza nayiphi na into, kodwa unokuthanda ukuqhubeka ubhala. Xa ndisaba ne-Facebook rhoqo ikwabelana ngamanqaku akho, ayikho i-turd eyifunayo ... yinto embi .... ke qhubeka phambili, unayo inkxaso!
14 Meyi 2019 kwi-12: 00
Kwaye kwakunjalo nakwenzekayo kum, ukuqokelela ngokuzenzekelayo kwakuxhomekeke kuphela kwixesha le-1, kodwa ndiyilungu elingangeenyanga ezintandathu. Ndibuye ndigcine iliso elingcono kuyo.
Kwiiveki ezimbalwa ezedlulileyo ndenza ukuphucula okuncinci ukuya kutsho. Ndiyayixabisa ngokwenene ukubhala kwakho uMartin!
Kwaye kwakhona kuphela inani elincinci lamalungu elongeziweyo, kutheni kungabi ncotshe okanye i-100 embalwa?
Kuphela kwe-€ 2 ngenyanga ungenza ilungu, nokuba ngaba usebhanka lokutya, usenokulikhumbula, okanye ngaba libiza kakhulu kangangokuba liya kukushaya kwisikhwama sakho?
14 Meyi 2019 kwi-17: 05
IZINDABA EZINTSHA ###
Kungenzeka njani ukuba (ukuva umlomo: I-Grapperhaus kwintlanganiso ye-telegraaf intetho ye-1ste link) kwiintlepheli zonxibelelwano (i-PR de V & J vd H) ziqhuba iimoto ezibiza kakhulu kunye noMartinVrijland obani kunye neengqinisiso kunye nohlalutyo olusisiseko alukho amawaka angamawaka ama-euro Unokuqokelela inyanga ngokuzibophezela kwakhe iminyaka eyisixhenxe.
Ukuba ifanelwe i-1, yiyo le website kwaye ifundeke ngakumbi kwikhonkco elingezantsi apho iGrapperhaus ithembela khona, ixesha esinikela ngokukhululekileyo kubahlalutyi abanyanisekileyo abangenayo kwaye bahlolwe ngenye indlela
Ukuhlaselwa kobuxoki kwizakhiwo zeTelgraaf kunye nePanorama eboniswa nguMartinVrijland, nceda
Ikhibhodi wabhala wathi:
15 Meyi 2019 kwi-09: 25
Umnikelo wesikhathi esisodwa owenziwe ngePaypal.
Umgudu omncinci kakhulu ukuba sele unayo i-akhawunti, ngoko akukho ngxaki.
Ndifunda okuninzi kumanqaku akho, undivumele ukuba ndijonge izinto ngombono ohlukeneyo kwaye unomhlalutyo olumnandi. Ndikwabelana nabo ezininzi ngeengxaki zenu malunga nekamva.
Umvundla omhlophe wabhala wathi:
15 Meyi 2019 kwi-22: 51
Kwaye kwakunzima kakhulu ukuba ngumthengi, kodwa ekugqibeleni ndaphumelela.
« Emva kukaThijs H., umyalelo osesikweni wokubanjwa, ukugcinwa kwirejista yangaphambili, iya kumkelwa ngumntu wonke
Ingaba umsebenzi weendaba kunye nabalobi beempendulo kwaye bathengisa imisebenzi ye-PsyOp njengoko benzayo ngemiboniso yeTV? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.752.845
Ingqina lesithsaba kunye nomdlalo ophakathi kolwaphulo-mthetho lukarhulumente kunye nommeli (Igqwetha lokulingana ngokuchasene nePlasman)
Inyathelo lokuqala kukulebhelisha, inyathelo lesibini kukhutshelwa ngaphandle: iqhosha lokugonya
Ungabanyanzela njani oorhulumente ukuba batshintshe ngelixa ungabanaki abantu?
Yintoni kanye le ngxaki yeNitrogen, kutheni amafama ekhalaza kwaye kutheni kuncitshiswa isantya?
Igqwetha likaShot uPhilippe Schol kunye nengxelo yobuqhophololo bobuxoki uSchiphol
Ikhamera 2 op Ingqina lesithsaba kunye nomdlalo ophakathi kolwaphulo-mthetho lukarhulumente kunye nommeli (Igqwetha lokulingana ngokuchasene nePlasman)
guppy op Ingqina lesithsaba kunye nomdlalo ophakathi kolwaphulo-mthetho lukarhulumente kunye nommeli (Igqwetha lokulingana ngokuchasene nePlasman)
UMartin Vrijland op Ingqina lesithsaba kunye nomdlalo ophakathi kolwaphulo-mthetho lukarhulumente kunye nommeli (Igqwetha lokulingana ngokuchasene nePlasman)
Ilanga op Ingqina lesithsaba kunye nomdlalo ophakathi kolwaphulo-mthetho lukarhulumente kunye nommeli (Igqwetha lokulingana ngokuchasene nePlasman)
Joyina amanye ama-1.681 ababhalisile